Barartoon Oromoo Yuunibaristi Jimmaa Haawwassa Oromooti iyyacha jiru
Qabsoo barattoonni Oromoo Yuunibaristii jimmaa naannawa finfinnee hinkenninu murree jedhuun taasifame irraa haga ammaatti baay'inni barattoota hidhamani guyyaa guyyaan dabalaara. Kaleessas jeechun Ebla 23/2014 ijoolleen jaha itti dabalamaniiru kunis kanta'e erga diiniin barattoota yuunibaristii jimmaa obbo Iwnatuu Hayiluu Taammanaa fi i/gaafatamaan poolisii mooraa yuunibarsitii obbo kaalid A/tamaam ijoollee kana beeksisa koottaa biirotti gorsaaf barbaadamtu jedhee baasee booda dabarsanii waraana wayyaaneef kennaniiru. Barattoonni kunis (kan kaleessaa qofa):-
1. Falmataa Bayeechaa(medicine 5th year
2. Galaanaa Abbabaa(governance 3rd year)
3. Zabbanaa Barasaa(fooklarii oromoo 3rd year)
4. Getaachoo Darajjee(governance 3rd year)
5. Israa'el Haabtaamuu(pedagogy) fi
6. Huseen Umar. Ijoollee jedhaman mana hidhaatti naqaniiru.
Yuunibaristiin tokko kan oganamu Acadami Yuunibaristii malee Polisi yuunibarstiin ta’uu hin qabuu. Gaafan mirga baratooni Yuunibaristii gafaatan deebi kan argatuu karaa Ogannota Yuunibaristii fi kara Ogannota Oromiyyan malee Waraana biyyolessa Yuunibaristii keessa bobasun ta’uu hin qabu jeecha jiru baratooni fi uumani Oromoo hundi. Ministerni barnoota fi Mootummaan Naannoo Oromiyya yaakka waraan biyyolessa Baratoota Oromoo irrati gegessa jiru atataman dhabuu fi baratoota mana barumsa isaanti deebisuun rakko kana furuu banan guyya murasaa keessati rakkon kun gara manane Barumsaa Sadarka lamafati babalachun Waraana Biyoolessa kana dura dhabachuuf akka deemuu ummani akkekachisaa jira. Waraana Biyyolessa Baratoota Yuunibaristii messaha tokko hin qabneeti bobasuun reebsisuu fi hisisuun seera mirga dhala nama cabsuun mootummaa Ethiopia ICC dhiyeesu himataa dhiyyacha jiru akka cimsuu ilee qooratoon mirga dhala nama UN Geneva ibsan jiru.
Oromoon biyya ala jiran fi dhabbilee siyyassa Oromoo goochaa baratoota Jimma Yuunibaristii kana irrarti raawwatama jiru cimsan kan balalefatan ta’uu isaan ibsacha jiru. Ethiopian mirga uumataa biyyati dhibuu keessatu baratoota Oromoo yuunibersty jiran irrati yakka goocha jirtu kanati gaafatamuun akka hin olee Miseensi Paarlamaa dhimma mirga dhala nama irrati hojeetan tokko hubachuu isaan ibsan jiru. Kana malee Muriin Ummata xiiqoo Tigire irra agnoo qabatee Uumataa bala Oromoo irrati yakka dalaguu kun gargarsa Europa akka hin arganee gafatama jirachuu isaa ilee dubatan jiru.